“What’s Wrong With Secretary Kim” ရဲ့ အောင်မြင်ချက်ကြီးက လန်ထွက် 😬 – Trend.com.mm
“What’s Wrong With Secretary Kim” ရဲ့ အောင်မြင်ချက်ကြီးက လန်ထွက် 😬
Posted on June 28, 2018 June 28, 2018 by Noel
ကိုရီးယားဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “What’s Wrong With Secretary Kim” ဇာတ်ကားဟာအခုဆိုရင် စတင်ပြသတဲ့အပိုင်းတည်းကပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုရရှိ လာတာ တရစပ်ပါပဲ။ကိုရီးယားရုပ်သံဌာနက ထုတ်လွှင့်ပြသဆဲဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပရိသတ်တွေကိုရရှိလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်လွှင့်ပြသချိန်ကစလို့ နှစ်ပတ်တိုင်တိုင် ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲစာရင်းမှာနံပါတ်တစ်ဖြစ်ခဲ့သလို အရင်ပထမတစ်ပတ်ကထက် ပိုပြီးကြည့်ရှုသူများလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
“What’s Wrong With Secretary Kim” ဇာတ်ကားဟာ မင်းသားချော Park Seo Joon နဲ့မင်းသမီးချော Park Min Young တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အချစ်ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းပုံစံပါ။လူငယ်ကြိုက်အချစ်ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင် စရိုက်နဲ့မင်းသားကြောင့်လည်း ပရိသတ်တွေက ပိုပြီးသဘောကျနေတာပါ(ကိုယ်အပါအ၀င်ပေါ့) ။
ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး၊ကြည့်ရှုနှုန်းအများဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲကိုစာရင်းလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခုလိုပဲတွေ့ရပါတယ်တဲ့။လက်ရှိပြသနေဆဲဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲ ၂၄ကားရှိတဲ့အထဲကမှ …
1. tvN’s “What’s Wrong with Secretary Kim” (23.44 percent)
2. KBS2’s “Are You Human, Too?” (9.82 percent)
3. KBS2’s “Suits” (9.32 percent)
4. tvN’s “Lawless Lawyer” (7.46 percent)
5. JTBC’s “Miss Hammurabi” (6.26 percent)
6. OCN’s “Life on Mars” (5.2 percent)
7. SBS’s “Wok of Love” (4.58 percent)
8. tvN’s “About Time” (4.19 percent)
9. KBS2’s “Mysterious Personal Shopper” (4.15 percent)
10. MBC’s “Come and Hug Me” (3.78 percent)
1. Park Seo Joon (“What’s Wrong with Secretary Kim”)
2. Park Min Young (“What’s Wrong with Secretary Kim”)
3. Seo Kang Joon (“Are You Human, Too?”)
4. Lee Tae Hwan (“What’s Wrong with Secretary Kim”)
5. Park Hyung Sik (“Suits”)
6. Jang Dong Gun (“Suits”)
7. Gong Seung Yeon (“Are You Human, Too?”)
8. Lee Joon Gi (“Lawless Lawyer”)
9. Seo Ye Ji (“Lawless Lawyer”)
10. Jung Kyung Ho (“Life on Mars”)
ဒီလိုမျိုး “What’s Wrong with Secretary Kim” က နံပါတ်တစ်နေရာကနေဦးဆောင်နေတာပါ။
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲလောကမှာ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ပရိသတ်အားပေးမှုတွေ တောက်လျှောက်ရရှိဦးမယ့်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။ မကြည့်ရသေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်း လက်တို့လိုက်ပါဦးနော် 😉😉😉
ကိုရီးယားဒရာမာဇာတျလမျးတှဲတဈခုဖွဈတဲ့ “What’s Wrong With Secretary Kim” ဇာတျကားဟာအခုဆိုရငျ စတငျပွသတဲ့အပိုငျးတညျးကပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုရရှိ လာတာ တရစပျပါပဲ။ကိုရီးယားရုပျသံဌာနက ထုတျလှငျ့ပွသဆဲဇာတျလမျးတှဲတှထေဲမှာ ဒီဇာတျလမျးတှဲဟာ အရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ပရိသတျတှကေိုရရှိလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ထုတျလှငျ့ပွသခြိနျကစလို့ နှဈပတျတိုငျတိုငျ ကွညျ့ရှုနှုနျးအမြားဆုံးဇာတျလမျးတှဲစာရငျးမှာနံပါတျတဈဖွဈခဲ့သလို အရငျပထမတဈပတျကထကျ ပိုပွီးကွညျ့ရှုသူမြားလာခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။
“What’s Wrong With Secretary Kim” ဇာတျကားဟာ မငျးသားခြော Park Seo Joon နဲ့မငျးသမီးခြော Park Min Young တို့ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့အခဈြဒရာမာ ဇာတျလမျးပုံစံပါ။လူငယျကွိုကျအခဈျြဇာတျကားဖွဈတဲ့အပွငျ ထူးခွားတဲ့ဇာတျကောငျ စရိုကျနဲ့မငျးသားကွောငျ့လညျး ပရိသတျတှကေ ပိုပွီးသဘောကနြတောပါ(ကိုယျအပါအဝငျပေါ့) ။
ပရိသတျတှကေိုဆှဲဆောငျနိုငျဆုံး၊ကွညျ့ရှုနှုနျးအမြားဆုံးဇာတျလမျးတှဲကိုစာရငျးလုပျကွညျ့တဲ့အခါမှာအခုလိုပဲတှရေ့ပါတယျတဲ့။လကျရှိပွသနဆေဲဒရာမာဇာတျလမျးတှဲ ၂၄ကားရှိတဲ့အထဲကမှ …
ဒီလိုမြိုး “What’s Wrong with Secretary Kim” က နံပါတျတဈနရောကနဦေးဆောငျနတောပါ။
ကိုရီးယားဇာတျလမျးတှဲလောကမှာ ဒီဇာတျလမျးတှဲက ပရိသတျအားပေးမှုတှေ တောကျလြှောကျရရှိဦးမယျ့ဇာတျလမျးတှဲဖွဈလာမယျဆိုတာသခြောပါတယျ။ မကွညျ့ရသေးတဲ့ပရိသတျတှကေိုလညျး လကျတို့လိုကျပါဦးနျော 😉😉😉
ချစ်သူစုံတွဲတိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာမလုပ်သင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးအရာက ဘာများလဲ?